Ixesha elibizwa ngokuba li-turkey ebusheni | IBezzia
Ixesha elibizwa ngokuba li-turkey ebusheni
UMaria Jose Roldan | 02/07/2021 22:00 | Abakwishumi elivisayo
Akukho mntu uyiphikisayo into yokuba akukho lula okanye kulula ukukhulisa umntwana. Zonke izigaba zobomi zinzima, nangona elithatha ikhekhe ngaphandle kwamathandabuzo kukufikisa. Inqanaba elinzima ngokwenene lobomi kubazali nakubantu abancinci ngokwabo abenza olu tshintsho.
Kuhlala kuthethwa ngendlela edibeneyo ukuba yiminyaka yeTurkey nangona le ngxelo ingeyona ichanekileyo kwaphela. Kwinqaku elilandelayo siza kukuxelela ngakumbi malunga neelebheli ezahlukeneyo kunye neenkolelo ezijikeleze umhlaba onzima wokufikisa.
1 Ixesha lokufikisa lixesha leelebheli kunye neenkolelo
2 Kutheni le nto ixesha lokufikisa lixesha elihle?
Ixesha lokufikisa lixesha leelebheli kunye neenkolelo
Njengoko besesitshilo, Ukufikisa lelona nqanaba linzima kuye nawuphi na umntu ekufuneka adlule kulo. Utshintsho ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo lungaphezulu kokucacileyo kwaye uninzi lwabantu abancinci luyacaphuka kuzo zonke iinkalo. Iingcinga kunye neelebhile malunga nokufikisa zikukukhanya kwemini kwaye oko akuthandi ulutsha ngokwabo kwaphela.
Ayinakunxulumana nenqanaba lokufikisa ngeziyobisi, utywala, amaqela, ukungabi nantlonelo okanye ubundlobongela. Abantu abancinci bangaphezulu koko, kwenzeka ntoni ukuba linqanaba lobomi elintsokothileyo kunye notshintsho oluninzi.
Ngenxa yoku, baninzi abazali aboyikayo okona kubi ngaphambi kokufika kwinqanaba lokufikisa. Elinye lawona mabinzana axhaphakileyo kuluntu lwanamhlanje kukuba umntwana xa efikelela kwinqanaba lokufikisa ukwiminyaka ye-turkey epheleleyo. Ngenye yeelebheli ezininzi eziza kusetyenziswa xa kuchazwa eli nqanaba lobomi.
Inyani yile yokuba ukusetyenziswa kweentetho zoluhlobo lwale minyaka ikhankanywe ngasentla ye-turkey, ayenzi naluphi na uhlobo lokulungileyo kulomfana uzama ukwenza ubuntu bakhe ukuze ube ngumntu omdala.
Kutheni le nto ixesha lokufikisa lixesha elihle?
Kuqhelekile ukuba abazali babonise ukungakhuseleki malunga nokuba umntwana wabo uza kusuka abe ngumntwana aye kwishumi elivisayo. Kodwa ayisiyiyo incopho le ukuze iilebhile ezahlukeneyo zinokufakwa kubantu abancinci. Alithandabuzeki elokuba abantu abancinci bazakufumana uthotho lweenguqu ezibaluleke kakhulu emzimbeni nasengqondweni. Kodwa olo tshintsho alukho mbi kwaye alubi kubazali okanye kulutsha ngokwabo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ulahle zonke ii-clichés kunye neelebhile zokufikisa njengebinzana elithandwayo: "lo mntwana ukwiminyaka yeTurkey"
Inqanaba lokufikisa kufuneka ke libe ngumzuzu owahlukileyo ongenakuphikiswa wokuba abantu abatsha baphile nge-100%. Ayinamsebenzi iindlela ezahlukileyo abanazo, kuba ubukhulu becala kuxhomekeke kubazali nakwingcali ukuqinisekisa ukuba abantu abancinci banokusebenzisa bonke ubuchule kunye nezakhono zabo kwaye babe ngabantu abadala abafanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Abakwishumi elivisayo » Ixesha elibizwa ngokuba li-turkey ebusheni
Izitshixo zokutya okuzinzileyo
Ukulinganisa iiplanga: kutheni zithandwa kangaka?